အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ အချစ်ဆိုတာရိုးအီသွားတတ်သလား??💕 – Trend.com.mm
Posted on September 10, 2018 by Noel
ဒီမေးခွန်းက ချစ်ရေးချစ်ရာနဲ့ပတ်သက်လာရင် အားလုံးလိုလိုမေးချင်နေကြတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်မယ်ထင်ပါရဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီနေ့လို အင်တာနက်ခေတ်ကြီးထဲမှာ ကိုယ်တွေမြင်တွေ့နေရတဲ့စုံတွဲတော်တော်များများဟာ ချစ်သူဖြစ်စကတော့ အများအားကျလောက်အောင်ရိုမန်တစ်ဆန်ခဲ့ကြပြီး အချိန်ကာလတစ်ခုအရောက်မှာ နှစ်ယောက်သားပြတ်စဲသွားကြတာချည်းပါပဲ။
ဒီလိုဆို ကိုယ်တို့တွေ မေးခွန်းထုတ်မိကြမယ်။အစကတော့ အသက်လောက်ချစ်တယ်။မခွဲနိုင်အောင်ချစ်တယ်၊လုံးဝမခွဲဘူးဆိုပြီးပြောခဲ့ကြတာ နောက်တော့ ဒီစကားတွေ ဘယ်ရောက်သွားလဲ၊တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မချစ်တော့ဘူးလား၊တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ချစ်ရတာရိုးသွားလို့နောက်တစ်ယောက်ကိုပြောင်းချစ်လိုက်တာလား စသဖြင့်ပေါ့။အဲ့ဒီလို ကိုယ်တွေမျက်စိရှေ့မှာ အရမ်းချစ်ကြတဲ့ချစ်သူတွေဟာလည်းသူစိမ်းပြင်ပြင်ဖြစ်သွားခဲ့လို့ အချစ်ဆိုတာတကယ်ရှိပါ့မလား၊အချစ်ဆိုတာ ပြောင်းလဲတတ်လားဆိုတဲ့သံသယတွေဖြစ်လာပြီး အချစ်ကိုယုံဖို့ကြောက်တတ်လာကြတာပါ။
ဒီတော့ အချိန်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှ အချစ်ဆိုတာရိုးအီသွားတတ်လားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေရမယ်ဆိုရင် True love never gets old လို့ပဲဖြေရမှာပါပဲ။အချစ်စစ်ဆိုတာ ဘယ်တော့မှရိုးအီသွားတာ၊ဟောင်းနွမ်းသွားတာမျိုးမရှိပါဘူး။အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ရိုးအီသွားမယ်။ပြောင်းလဲသွားမယ်ဆိုရင် အဲ့ဒါက အချစ်စစ်မဟုတ်လို့ပါပဲ။တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ချစ်ကြလို့ ချစ်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုရုံနဲ့ အချိန်တွေအကြာကြီးမြဲခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့ အချစ်စစ်မဟုတ်သေးပါဘူး။အချစ်စစ်ဆိုတာ ကိုယ့်ချစ်သူကို ချစ်တဲ့အကြောင်း အချိန်ကာလနဲ့အမျှ သက်သေပြရတာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။
အချစ်စစ်ဆိုတာ ဘယ်တော့မှရိုးအီမသွားသလို အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ပိုပြီးတိုးတဲ့အချစ်တွေ၊ပိုပြီးတိုးတဲ့နားလည်မှုတွေပဲရှိလာတာပါ။ဒါကြောင့်မို့လို့ အခုကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ ကြိုတင်တွေးပူမနေပါနဲ့။ချစ်သူကိုချစ်ပါ။ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ဘ၀တိုးတက်ရေးအတွက်လည်းမမေ့ပါနဲ့။အချစ်ကိုမျက်စိစုံမှိတ်ယုံပြီး သူနဲ့သာဆိုရင်…ဆိုတဲ့အတွေးတွေက Kid တွေရဲ့အတွေးပါပဲနော်။
မိုက်ရူးရဲဆန်ဆန်ချစ်တာထက် အချစ်ရေးကို နူးနူးညံ့ညံ့ကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက်ချစ်မယ်။သူချစ်ပေးသလောက်လက်ခံမယ်။အပေးအယူသာ မျှတမယ်ဆိုရင် နှစ်ယောက်တစ်ဘ၀ဖြစ်မှာပါပဲ။ ကောက်ရိုးမီးလိုဟုန်းခနဲထတောက်ပြီးအရှိန်ပြင်းသွေးပူတဲ့အချစ်ထက် နည်းနည်းချင်းစီချစ်ပြီး တဖြည်းဖြည်းချင်းနားလည်မှုတည်ဆောက်ကာ အချိန်တွေအကြာကြီးချစ်သွားနိုင်တဲ့အချစ်မျိုးကသာ အချစ်စစ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဦးတည်သွားစေမှာပါ 🌸
ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အချစ်အတုတွေအတွက် ကြေကွဲမနေပါနဲ့။အချစ်စစ်ကို မတွေ့လိုက်မှာစိုးလို့ပါ💕
ဒီမေးခှနျးက ခဈြရေးခဈြရာနဲ့ပတျသကျလာရငျ အားလုံးလိုလိုမေးခငျြနကွေတဲ့မေးခှနျးတဈခုဖွဈမယျထငျပါရဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီနလေို့ အငျတာနကျခတျေကွီးထဲမှာ ကိုယျတှမွေငျတှနေ့ရေတဲ့စုံတှဲတျောတျောမြားမြားဟာ ခဈြသူဖွဈစကတော့ အမြားအားကလြောကျအောငျရိုမနျတဈဆနျခဲ့ကွပွီး အခြိနျကာလတဈခုအရောကျမှာ နှဈယောကျသားပွတျစဲသှားကွတာခညျြးပါပဲ။
ဒီလိုဆို ကိုယျတို့တှေ မေးခှနျးထုတျမိကွမယျ။အစကတော့ အသကျလောကျခဈြတယျ။မခှဲနိုငျအောငျခဈြတယျ၊လုံးဝမခှဲဘူးဆိုပွီးပွောခဲ့ကွတာ နောကျတော့ ဒီစကားတှေ ဘယျရောကျသှားလဲ၊တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ မခဈြတော့ဘူးလား၊တဈယောကျကိုတဈယောကျခဈြရတာရိုးသှားလို့နောကျတဈယောကျကိုပွောငျးခဈြလိုကျတာလား စသဖွငျ့ပေါ့။အဲ့ဒီလို ကိုယျတှမေကျြစိရှမှေ့ာ အရမျးခဈြကွတဲ့ခဈြသူတှဟောလညျးသူစိမျးပွငျပွငျဖွဈသှားခဲ့လို့ အခဈြဆိုတာတကယျရှိပါ့မလား၊အခဈြဆိုတာ ပွောငျးလဲတတျလားဆိုတဲ့သံသယတှဖွေဈလာပွီး အခဈြကိုယုံဖို့ကွောကျတတျလာကွတာပါ။
ဒီတော့ အခြိနျတှကွောလာတာနဲ့အမြှ အခဈြဆိုတာရိုးအီသှားတတျလားဆိုတဲ့မေးခှနျးကိုဖွရေမယျဆိုရငျ True love never gets old လို့ပဲဖွရေမှာပါပဲ။အခဈြစဈဆိုတာ ဘယျတော့မှရိုးအီသှားတာ၊ဟောငျးနှမျးသှားတာမြိုးမရှိပါဘူး။အခြိနျကွာလာတာနဲ့အမြှ ရိုးအီသှားမယျ။ပွောငျးလဲသှားမယျဆိုရငျ အဲ့ဒါက အခဈြစဈမဟုတျလို့ပါပဲ။တဈယောကျနဲ့တဈယောကျခဈြကွလို့ ခဈြသူတှဖွေဈတယျဆိုရုံနဲ့ အခြိနျတှအေကွာကွီးမွဲခဲ့တယျဆိုတာနဲ့ အခဈြစဈမဟုတျသေးပါဘူး။အခဈြစဈဆိုတာ ကိုယျ့ခဈြသူကို ခဈြတဲ့အကွောငျး အခြိနျကာလနဲ့အမြှ သကျသပွေရတာမြိုးပဲဖွဈပါတယျ။
အခဈြစဈဆိုတာ ဘယျတော့မှရိုးအီမသှားသလို အခြိနျကွာလာတာနဲ့အမြှ ပိုပွီးတိုးတဲ့အခဈြတှေ၊ပိုပွီးတိုးတဲ့နားလညျမှုတှပေဲရှိလာတာပါ။ဒါကွောငျ့မို့လို့ အခုကိုယျ့လကျထဲမှာရှိနတေဲ့အခဈြရေးနဲ့ပတျသကျလို့ ကွိုတငျတှေးပူမနပေါနဲ့။ခဈြသူကိုခဈြပါ။ဒါပမေဲ့ ကိုယျ့ဘဝတိုးတကျရေးအတှကျလညျးမမပေ့ါနဲ့။အခဈြကိုမကျြစိစုံမှိတျယုံပွီး သူနဲ့သာဆိုရငျ…ဆိုတဲ့အတှေးတှကေ Kid တှရေဲ့အတှေးပါပဲနျော။
မိုကျရူးရဲဆနျဆနျခဈြတာထကျ အခဈြရေးကို နူးနူးညံ့ညံ့ကိုငျတှယျထိနျးသိမျးတတျဖို့လိုပါတယျ။ကိုယျတတျနိုငျသလောကျခဈြမယျ။သူခဈြပေးသလောကျလကျခံမယျ။အပေးအယူသာ မြှတမယျဆိုရငျ နှဈယောကျတဈဘဝဖွဈမှာပါပဲ။ ကောကျရိုးမီးလိုဟုနျးခနဲထတောကျပွီးအရှိနျပွငျးသှေးပူတဲ့အခဈြထကျ နညျးနညျးခငျြးစီခဈြပွီး တဖွညျးဖွညျးခငျြးနားလညျမှုတညျဆောကျကာ အခြိနျတှအေကွာကွီးခဈြသှားနိုငျတဲ့အခဈြမြိုးကသာ အခဈြစဈဆိုတဲ့လမျးကွောငျးကိုဦးတညျသှားစမှောပါ
ဆုံးရှုံးလိုကျရတဲ့အခဈြအတုတှအေတှကျ ကွကှေဲမနပေါနဲ့။အခဈြစဈကို မတှလေို့ကျမှာစိုးလို့ပါ 💕
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို စိုက်ကြည့်ခြင်းဟာ ရိုင်းပြတဲ့ အပြုအမူလား ?
ရှုပ်ထွေးလွန်းတဲ့ အချစ်မှာ အတ္တကို ရှေ့တန်းတင်မိရင်